Fantaro i Ramzy Muliawan, mpampiantrano ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 12 – 18 Nov 2019 · Global Voices teny Malagasy
Fantaro i Ramzy Muliawan, mpampiantrano ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 12 – 18 Nov 2019
Voadika ny 11 Novambra 2019 15:25 GMT
Sarin'i Ramzy Muliawan
Ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fahamaroam-piteny an-tserasera manerana an'i Azia, isankerinandro dia hisy hifandimby hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ireo mpikatroka sy mpanandrateny samihafa ho an'ny fiteny, hizara ny zava-niainany tamin'ny famelomana aina indray sy fampahafantarana ireo fiteny teratany any amin-dry zareo. Ity fanentanana ity dia fiarahana miasa eo amin'ny Rising Voices, ny Digital Empowerment Foundation, ary ny O Foundation..
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Ramzy Muliawam (@muliawanramzy), izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Ramzy Muliawan no anarako. Anisan'ny ao anatin'ny hetsika Wikimedia hatramin'ny taona 2007. Voalohany indrindra dia mandray anjara amin'ny Wikipedia Indoneziàna sy Minangkabau aho, ary koa ny vondrompiarahamonina Wikimedia Padang. Mifangaroharo be ny zava-mahaliana ahy, fa manoratra betsaka momba ny politika, tantara, lalàna ary ny baolina kitra aho. Amin'izao fotoana izao aho dia mianatra momba ny Lalàna ao amin'ny oniversite Andalas ao Padang.
Voalohany indrindra dia fiteny zara raha misy fombandrazana voarakitra an-tsoratra ny fiteny Minangkabau. Amin'ny maha-ampahany lehibe amin'ny fiteny Malay azy, tany am-piandohana izy io dia nosoratana tamin'ny endritsoratra Jawi, talohan'ny nahatongavan'ny endritsoratra latina maoderina. Na teo aza ny fampiasana be dia be ny endritsoratra latina, tsy nisy ezaka faobe natao mba hanoratana marina amin'ny fiteny Minangkabau ; eo amin'ny fiainana andavanandro, misy ny toetra (diglossia) ampiasany araka izay ilàny sy mahametimety azy ny fiteny Minangkabau sy Indoneziàna, ary ny literatiora dia mijanona ho amin'ilay endriny zara raha misy am-bava. Ety anaty aterineto, ny Wikipedia Minangkabau no iray amin'ny ezaka voalohany hampivoarana ny fanoratana amin'ny fomba maoderina ny fombandrazana ho amin'ny fiteny Minangkabau, ary tao anatin'ny dimy taona farany, natrehanay ny fitomboan'ny fanantenana hanao soratra Minangkabau matanjaka kokoa.
Kasaiko ny hanàla ireo fisalasalàna. Betsaka amin'ireo olona Minangkabau aza no misalasala hoe tena hisy olona iray tokoa ho afaka manoratra amin'io fiteny io, ary io no fanamby voalohany atrehan'ireo Minangkabau mpikatroka ao amin'ny Wikimedia. Kasaiko ny handrakotra ireo tenimparitra isankarazany sy ireo endrika fiteny am-bava amin'ny Minangkabau ary ny fomba fanoratra azy io, hatramin'ny tantaran'ny fombandrazana ara-piteny sy ny literatiora Minangkabau. Farany nefa tsy ny maivana indrindra, kasaiko koa ny hifantoka amin'ny Wikipedia Minangkabau, ary koa ny fampiroboroboana ireo hetsika santatra marobe hafa ety anaty aterineto izay mpampiroborobo ny fitahirizana sy fampivoarana ny fiteny.
Fony aho nanomboka nandray anjara mavitrika tao amin'ny Wikipedia Minangkabau, somary ny fitia te-hahalala zavatra no nanosika ahy: ho an'ny fiteny iray izay manankarena ary marolafy amin'ny endrika itenenana azy, ahoana no zary tsy mahamety ny fanoratana azy io ? Mbola mientanentana hatrany aho izao momba izay hametrahana fomba iray fanoratra ho anà fiteny iray tsy natao afa-tsy notenenina, mba hitahirizana azy sy hivelomana. Amin'ny hoavy, antenaiko fa ho maro ireo Minangkabau tanora hanoratra amin'ny fitenin-dry zareo, tsy hoe fotsiny momba ny kolontsainy, ny sakafony, na ny fomba fanaony, fa koa momba ireo zavatra rehetra misy eran'izao tontolo izao.